(trg)="1"> Nsogbu nke Na - echu Onye Ọ Bụla Bụ́ Nne Ma Ọ Bụ Nna Ụra
(trg)="2"> SCOTT na Heather bụ di na nwunye obi ụtọ , ndị ahụ́ dị gara gara .
(trg)="4"> * Ha na - elekọta nwa ha nwoke nke ọma .
(trg)="6"> Ọ na - akpata oké nchegbu .
(trg)="7"> Ọrụ dị na ya karịkwara akarị .
(trg)="8"> E nwere ọtụtụ ihe e kwesịrị ịkụziri ụmụaka .
(trg)="9"> Otu n’ime ibu ọrụ kacha echu Scott na Heather ụra bụ nke a : Ha chọrọ ichebe nwa ha ka a ghara imetọ ya .
(trg)="10"> N’ihi gịnị ?
(trg)="11"> Heather kwuru , sị , “ Papa m bụ onye aṅụrụma ihu na - adịghị atọ ọchị .
(trg)="14"> O metọkwara mụ na ụmụnne m ndị nwanyị . ”
(trg)="15"> * Ọtụtụ mmadụ kwetara na ụdị mmetọ a na - enye onye e metọrọ nsogbu n’obi nke ukwuu .
(trg)="16"> Ka a sịkwa ihe mere Heather ji kpebisie ike ichebe nwa ya nwoke !
(trg)="17"> Scott chekwara na ọ dị mkpa ka ha chebe nwa ha .
(trg)="18"> Ọtụtụ ndị nne na nna na - echegbu onwe ha banyere mmetọ a na - emetọ ụmụaka .
(trg)="19"> Ikekwe , ị na - echegbukwa onwe gị banyere ya .
(trg)="20"> O nwere ike ịbụ na e metọbeghị gị dị ka e metọrọ Scott na Heather .
(trg)="21"> O nwekwara ike ịbụ na ị maghị otú ọ na - adị .
(trg)="22"> Ma o doro anya na ị nụtụla akụkọ ndị na - awụ akpata oyi n’ahụ́ banyere otú omume ọjọọ a si ju ebe nile .
(trg)="23"> N’ụwa nile , obi na - amapụ ezigbo ndị nne na nna ma ha nụ ihe ndị a na - eme ụmụaka bi n’ógbè ha .
(trg)="24"> Ọ bụghị ihe ijuanya na otu onye na - eme nnyocha n’ihe banyere imetọ mmadụ kọwara otú imetọ ụmụaka si arị elu dị ka “ otu n’ime ihe a chọpụtarala kasị akụda mmụọ n’oge anyị a . ”
(trg)="25"> Nke a bụ nnọọ akụkọ ọjọọ .
(trg)="26"> Ma ọ̀ bụ ihe ijuanya na ndị mmadụ na - eme omume ọjọọ ndị a ?
(trg)="27"> Ọ naghị eju ndị na - amụ Bible anya .
(trg)="28"> Okwu Chineke kọwara na anyị bi n’oge nsogbu , nke a na - akpọ ‘ ụbọchị ikpeazụ . ’
(trg)="29"> Ọ bụkwa oge ndị mmadụ ga “ na - eme ihe ike ike , ” oge ha ‘ ga - ahụ nanị onwe ha n’anya , ’ gharakwa inwe “ obi mmadụ . ” — 2 Timoti 3 : 1 - 5 .
(trg)="30"> Imetọ mmadụ bụ nsogbu a na - amaghị ihe a ga - eme ya eme .
(trg)="31"> N’ezie , ọ na - eri ụfọdụ ndị nne na nna ọnụ ma ha cheta otú obi si fee ndị mmadụ azụ , bụ́ ndị na - achọgharị ụmụaka ha ga - emetọ .
(trg)="32"> Ma , nsogbu a ọ̀ karịrị ndị mụrụ ụmụ nke na o nweghị ihe ha ga - emeli banyere ya ?
(trg)="33"> Ka è nwere ezigbo ihe ndị nne na nna nwere ike ime iji chebe ụmụ ha ka ihe ọ bụla ghara ime ha ?
(trg)="34"> Isiokwu ndị na - esonụ ga - aza ajụjụ ndị a .
(trg)="35"> [ Ihe odide ala ala peeji ]
(trg)="36"> A gbanwere aha ndị e kwuru okwu ha n’isiokwu a nakwa n’isiokwu abụọ ndị na - eso ya .
(trg)="37"> Imetọ nwatakịrị pụtara onye toro eto iji nwatakịrị na - egbo agụụ mmekọahụ na - agụ ya .
(trg)="38"> Nke a na - agụnyekarị ihe Bible kpọrọ ịkwa iko , ma ọ bụ por·neiʹa .
(trg)="39"> Omume ndị so na nke a bụ ịpị nwoke aka n’amụ ma ọ bụ imetụ nwanyị aka n’ọtụ , idina mmadụ , iji ọnụ amịcha amụ ma ọ bụ ọtụ , na isi n’ikè enwe mmekọahụ .
(trg)="40"> Omume mmetọ ndị ọzọ , ndị dị ka ịpị nwanyị aka n’ara , mmadụ ịgwa onye ọzọ ka ya na ya nwee mmekọahụ n’ezoghị ọnụ , igosi nwatakịrị foto ma ọ bụ fim ndị gba ọtọ , ikiri ndị na - enwe mmekọahụ , na mmadụ ịma ụma gbara ọtọ n’ebe ọ na - ekwesịghị ịgba ọtọ , nwere ike iso n’ihe ndị Bible katọrọ ma kwuo na ha bụ “ omume rụrụ arụ ” ma ọ bụ “ ụdị anyaukwu . . . na - arụpụta adịghị ọcha . ” — Ndị Galeshia 5 : 19 - 21 ; Ndị Efesọs 4 : 19 .
(trg)="1"> Otú Ị Ga - esi Chebe Ụmụ Gị
(trg)="2"> Ọ BỤ nanị mmadụ ole na ole n’ime anyị ga - achọ ichewe echiche ogologo oge banyere mmetọ a na - emetọ ụmụaka .
(trg)="3"> Nanị ichetụdị ya n’echiche na - amapụ ndị nne na nna obi !
(trg)="4"> N’agbanyeghị nke a , ụdị mmetọ a nke na - emenye ndị mmadụ ụjọ , nke dịkwa mwute na - eme eme n’ụwa taa .
(trg)="5"> Ọ na - akpakwa ụmụaka aka ọjọọ .
(trg)="7"> Olee ihe ị ga - adị njikere ime ka ihe ọ bụla ghara ime nwa gị ?
(trg)="8"> Nanị ịmata na e nwere ndị na - emetọ ụmụaka nwere ike iyi ihe ọ na - enweghị ihe ọ bụ .
(trg)="9"> Ma , o nwere ike inye aka ichebe ụmụ gị .
(trg)="10"> Ekwela ka mmetọ a juru ebe nile kụda gị aka .
(trg)="11"> Ma ọ́ dịghị nnọọ ihe ọzọ , i nwere ike nke nwa gị na - enweghị — ụdị ike nke ga - ewe nwa gị ọtụtụ afọ , ọbụna ọtụtụ iri afọ , tupu ya enweta ya .
(trg)="12"> Ọtụtụ afọ i birila ndụ emeela ka ị mara ọtụtụ ihe , meekwa ka i nwee ọtụtụ ahụmahụ na amamihe .
(trg)="13"> Isi ihe dị na ya bụ ịgbakwu mbọ jiri ihe ndị a i nwere na - echebe nwa gị .
(trg)="14"> Anyị ga - atụle ihe atọ bụ́ isi nne na nna ọ bụla nwere ike ime .
(trg)="15"> Ha bụ : ( 1 ) Bụrụ onye mbụ ga - echebe nwa gị ka a ghara imetọ ya , ( 2 ) kọọrọ nwa gị ihe ndị o kwesịrị ịma banyere mmekọahụ , nakwa ( 3 ) kụziere nwa gị ihe ndị bụ́ isi ọ ga - eme iji chebe onwe ya .
(trg)="16"> Ị̀ Bụ Onye Mbụ Na - echebe Nwa Gị Ka A Ghara Imetọ Ya ?
(trg)="17"> Ndị ọ bụ ọrụ ha ichebe ụmụaka ka a ghara imetọ ha bụ ndị nne na nna , ọ bụghị ụmụaka .
(trg)="18"> Ya mere , ọ dị mkpa ibu ụzọ kụziere ndị nne na nna ihe tupu a kụziwere ụmụaka .
(trg)="19"> Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna , o nwere ihe ole na ole ọ dị mkpa ka ị mata banyere mmetọ a na - emetọ ụmụaka .
(trg)="20"> Ọ dị mkpa ka ị mata ụdị ndị na - emetọ ụmụaka na otú ha si eme ya .
(trg)="21"> Ndị nne na nna na - echekarị na ndị na - emetọ ụmụaka bụ ndị ha na - amaghị ama , bụ́ ndị na - abịa mgbe ọchịchịrị gbara , na - achọ otú ha ga - esi tọrọ ụmụaka ma dinaa ha n’ike .
(trg)="22"> N’eziokwu , e nwere ndị si otú ahụ eme ya .
(trg)="23"> Ụlọ ọrụ mgbasa ozi na - eme ka anyị mara banyere ndị a mgbe nile .
(trg)="24"> Ma , ndị si otú ahụ eme ya dị nnọọ ole na ole .
(trg)="25"> Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na mgbe ọ bụla e metọrọ nwatakịrị , onye rụrụ arụrụala ahụ bụ onye nwatakịrị ahụ ma ama ma tụkwasị obi .
(trg)="26"> Ọ na - esi nnọọ ike ikweta na o nwere ike ịbụ onye agbata obi gị nke ihe na - adabara gị na ya , onye nkụzi , nọọsụ ma ọ bụ dọkịta , onye na - akụzi egwuregwu , ma ọ bụ onye ikwu , ga - achọ imetọ nwa gị .
(trg)="27"> Nke bụ́ eziokwu bụ na ọtụtụ mmadụ adịghị otú ahụ .
(trg)="28"> Ọ dịghị mkpa ibido nyowe mmadụ nile gị na ha na - emekọ ihe enyowe .
(trg)="29"> Ma , i nwere ike ichebe nwa gị site n’ịmụta ụzọ aghụghọ onye na - emetọ ụmụaka si abịa . — Lee igbe dị na peeji nke isii .
(trg)="30"> Ịmata ụzọ aghụghọ ndị ahụ nwere ike ime ka gị onwe gị bụ́ nne ma ọ bụ nna dịkwuo njikere ịbụ onye mbụ ga - echebe nwa gị .
(trg)="31"> Dị ka ihe atụ , ọ bụrụ na otu onye nke na - enwekarị mmasị n’ebe ụmụaka nọ karịa ka ọ na - enwe n’ebe ndị toro eto nọ enwee mmasị n’ebe nwa gị nọ ma na - emeso ya ihe n’ụzọ pụrụ iche , na - enye ya onyinye ma ọ bụ kwuo ka o legidere gị nwa gị ahụ anya mgbe ị na - agaghị anọ , ma ọ bụkwanụ kwuo ka nanị ya na nwa gị soro kpapụ , gịnị ka ị ga - eme ?
(trg)="32"> Ị̀ ga - ekwubi ozugbo na onye ahụ bụ onye na - emetọ ụmụaka ?
(trg)="33"> Mbanụ .
(trg)="34"> Ekwubila otú ahụ ozugbo .
(trg)="35"> O nwere ike ịbụ na onye mere otú ahụ ebughị ihe ọjọọ ọ bụla n’obi .
(trg)="36"> Ma , nke a nwere ike ime ka i lerukwuo anya ala .
(trg)="37"> Bible sịrị : “ Onye na - enweghị uche na - ekwere okwu nile ọ bụla : ma onye nwere ezi uche na - aghọta ijeụkwụ ya . ” — Ilu 14 : 15 .
(trg)="38"> Cheta na onye na - ekwe gị nkwa imere gị elu na ala nwere ike ịdị na - ekwe nkwa ahụ iji ghọgbuo gị .
(trg)="39"> Jiri nlezianya nyochaa onye ọ bụla gwara gị ka nanị ya na nwa gị nọrọ .
(trg)="40"> Mee ka onye ahụ mara na i nwere ike ịbịa leta nwa gị oge ọ bụla ị chọrọ .
(trg)="41"> Melissa na Brad , bụ́ di na nwunye nwere ụmụntakịrị nwoke atọ , na - akpachapụ anya banyere otú ha si ahapụrụ ndị toro eto ụmụ ha .
(trg)="42"> Otu oge , mgbe a na - akụziri otu n’ime ụmụ Melissa egwu n’ụlọ ha , ọ gwara onye na - akụziri nwa ya egwu , sị : “ M ga na - abata n’ime ụlọ a mgbe ọ bụla m chọrọ ruo mgbe ị lara . ”
(trg)="43"> O nwere ike iyi ka nke a ọ̀ gafeela ókè , ma ọ kaara ndị nne na nna mma ime otú ahụ karịa ịkwa m̀ makwaara n’ikpeazụ .
(trg)="45"> Mata ndị bụ́ ndị enyi ya , nakwa ihe ọ na - eme n’ụlọ akwụkwọ .
(trg)="46"> Mata ihe nile banyere mkpapụ nwa gị chọrọ ime .
(trg)="47"> Otu dọkịta nke na - agwọ ndị isi na - akpakọchaghị ọnụ , bụ́ onye nyeerela ndị e metọrọ aka ruo afọ iri atọ na atọ , kwuru na ya ahụla ọtụtụ mmetọ a gaara egbochi ma a sị nnọọ na ndị mụrụ ụmụ leruru anya ala .
(trg)="48"> Ọ sịrị na otu onye nke metọrọ ụmụaka , bụ́ onye a mara ikpe , kwuru , sị : “ Ọ bụ ndị nne na nna na - eji aka ha akpọnye anyị ụmụ ha . . . .
(trg)="49"> Ha mere nnọọ ka ọ dịrị m mfe . ”
(trg)="50"> Chetakwa na ọtụtụ ndị na - emetọ ụmụaka na - achọ ụmụaka ndị na - agaghị esiri ha ike inweta .
(trg)="51"> Ndị nne na nna , bụ́ ndị na - etinyesi anya ike n’ebe ụmụ ha nọ , na - eme ka o siere ndị na - emetọ ụmụaka ike inweta ha .
(trg)="52"> Otú ọzọ i nwere ike isi bụrụ onye mbụ ga - echebe nwa gị ka a ghara imetọ ya bụ site n’ige ya ntị nke ọma .
(trg)="53"> Ụmụaka anaghị ekwukarị hoo haa na e metọọla ha ; ọ na - eme ha ihere , ụjọ na - atụkwa ha n’ihi na ha amaghị ihe ndị mmadụ ga - eme ma ha nụ ya .
(trg)="54"> Ya mere , na - ege ha ntị nke ọma iji nụta ụmụ obere ihe ndị ga - eme ka ị mara ihe na - emenụ .
(trg)="55"> * Ọ bụrụ na o nwere ihe nwa gị kwuru nke na - enye gị nsogbu n’obi , jiri nwayọọ were ajụjụ jụpụta ya ihe dị ya n’obi .
(trg)="56"> Ọ bụrụ na ọ sịrị na ọ chọghịzi ka otu onye nke na - elekọtabu ya na - elekọta ya , jụọ ya ihe mere o ji kwuo otú ahụ .
(trg)="57"> Ọ bụrụ na ọ sị na o nwere otú otu onye toro eto si egwusa ya egwu , jụọ ya , sị : “ Olee ụdị egwu ọ na - egwusa gị ?
(trg)="58"> Gịnị ka ọ na - eme gị ? ”
(trg)="59"> Ọ bụrụ na ọ sịrị na o nwere onye metụrụ ya aka n’ebe na - eme ka ọchị tọwa ya , jụọ ya , sị , “ Olee ebe o metụrụ gị aka ? ”
(trg)="60"> Elegharala ihe nwa ahụ gwara gị anya ozugbo .
(trg)="61"> Ndị na - emetọ ụmụaka na - agwa ha na ọ bụrụ na ha kọọrọ ndị mmadụ , na o nweghị onye ga - ekweta ihe ha kwuru ; ihe ahụ ha kwuru na - abụkarịkwa eziokwu .
(trg)="62"> Ọ bụrụ na e metọrọ nwatakịrị , otu ihe nke ga - eme ka o nwetaghachi onwe ya bụ ma nne ya ma ọ bụ nna ya kweta ihe o kwuru ma nyere ya aka .
(trg)="63"> Kọọrọ Nwa Gị Ihe Ndị O Kwesịrị Ịma Banyere Mmekọahụ
(trg)="64"> Otu akwụkwọ e ji eme nnyocha nke na - ekwu banyere imetọ ụmụaka sịrị na otu onye nke metọrọ ụmụaka , bụ́ onye a mara ikpe , kwuru , sị : “ Ị kpọnye m nwa na - enweghị ihe ọ maara banyere mmekọahụ , mara na ị kpọnyela m onye ọzọ m ga - emetọ . ”
(trg)="65"> Ndị nne na nna kwesịrị iburu okwu a nke na - awụ akpata oyi n’ahụ́ n’uche mgbe nile .